Kulan II ee Geomatics Free, Venezuela - Geofumadas
Kulan II ee Geomatics Free, Venezuela
Bishan Nofeembar 13 iyo 14 ayaa lagu qaban doonaa Caracas munaasabad labaad, ka dib markii ay u muuqato in hore dabaaldega bisha Luulyo Aad ayay u fiicnaayeen
Fikrado badan ayaa laga soo qaadaa mawduuca, waraaqaha ka soo baxa qaabka caadiga ah ee aan ku dhuftay:
"Tusaaleyaal loogu talagalay horumarinta qalabka furan ee furan" kuwaas oo la barayo Givanni Quaglianno of SIGIS
halkan waxaan ka tagayaa wax ka mid ah ajandaha ku jira amar diidmo ah:
Geomatics lacag la'aan ah Francisco Palm (CENDITEL)
Nidaamka deegaanka dabiiciga ah ee furan Alejandro Chumaceiro (SIGIS)
Hannaanka socdaalka ee GIS lacag la'aan ah Silvia Porras (PDVSA)
Macluumaad lacag la'aan ah oo loogu talagalay bulsho xor ah Peter Blanco (MAT)
GIS online Luís Laporta iyo Lourdes Hernández (SIGOT - MINAMBIENTE)
Siyaasadaha iyo xeerarka macluumaadka kartoomyada iyo adeegyada jimicsiga Yobany Quintero (CORPOVARGAS)
Qeybaha Kombiyuutarka Macluumaadka Muuqaalka Valenty González (CREATIVA CA)
Kaabayaasha Qaran ee Macluumaadka Qaranka iyo SIG Zaida Pinto (CNTI)
Tirakoobyada bulshada José Campos (HIDROFALCON)
Dhisidda GIS oo ka socota Live - USB Carlos Ruiz (HOWARTH)
Waxaa sidoo kale jiri doona Forum oo ku saabsan korriinta gogoldhigyada xorta ah ee ku yaala Venezuela oo lagu noolyahay dibadbaxyo PostGIS iyo PostgreSQL u dhexeeya abuurista GeoDatabase iyo dhisto a mareenka geometries meel u dhow.
Waxaan helayaa aragtida ah in barnaamijkan uu socon doono, waxay hagaajiyeen aqoonsiga leh calaamad cusub oo xitaa hadda xitaa waxay abuurtay bulsho Openplans, oo aan ka bartay Mauricio Márquez, halkaas oo dad badani ay diiwaangashan yihiin. Waxay ku fiicnaan lahaayeen inay soo aruuriyaan bandhigyada dhacdooyinka oo ay u gudbiyaan bogga ... oo ay ku dhajiyaan boostada.
Sidaa darteed haddii ay ku dhow yihiin ma seegaan dhacdada, waxaan fekerayaa maalin maalmaha ka mid ah kuwan soo muuqda sannadka kale ilaa iyo inta uu maareeyuhu iila dhaqmo sidii "pitiyankee" hee.
Waxaan iloobey, sababtoo ah waxaan nahay wadamada Hispanic iyo sababo la yaab leh marka ay wax walba u muuqdaan inay diyaar yihiin markaa wax dhib ah ma soo baxaan, ma dhaawacayso si ay u ogaadaan haddii ay jiraan "casriyeysyo" liiska dooddaada.
Post Previous«Previous Bentley waxay soo bandhigi doontaa Microstation Athens V8i
Post Next Oktoobar, kooban ee bisha GeofumadasNext »
2 Jawaab: "Kulankii IIaad ee Geomatics Free, Venezuela"
Nofeembar, 2008 at
hehe, Pitiyankee waa kaftan of madaxweynayaasha dadweynaha.
Mauricio Márquez isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin saaxiibka warbixinta, si daacad ah u shaqeynaya, waxaan marwalba aqriyaa, laakiin marnaba kuma dhicin inaan qoro.
Sida soo socda iyo in pitiyankee noqon kartaa hubiyo in ka badan yahay Blå Blå Blå ka badan wax kasta oo kale, marka aad halkan u joognaa inaad ku gaadhaan danihiina doonaa in ay tahay buuqa ka badan cabulla ah, taas oo cologialmente ka dhigan tahay in dad aan feejignaan badan ee kuwan socdaan xaaladaha.
Dhowaan waxaan xaqiijin doonaa xarun, Salaan ka timid Venezuela ...